ब्ल्याकज्याक कार्ड गणना - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्ल्याकज्याक » ब्ल्याकज्याक कार्ड गणना
शीर्ष कार्ड गन्ती मिथ्याहरू तोड्दै
मान्यता १: कार्ड गणना गर्न यो अवैध छ
मिथ्या २: कार्डहरू गणना गर्न तपाईंसँग तेज दिमाग र मेमोरी हुनु पर्छ
मिथ्या २: तपाई गणितमा अत्यधिक कुशल र जानकार हुनुपर्छ
मान्यता 3: तपाईसँग ठूलो बै bank्करोल हुन आवश्यक छ यदि तपाई कार्ड गणनालाई गम्भीरताका साथ लिन चाहानुहुन्छ भने
मिथ्या You: तपाईंले यसलाई लामो समयसम्म काम गर्न कार्ड गणनाको अध्ययन गर्न आवश्यक पर्दछ
मान्यता:: क्यासिनो पर्यवेक्षकहरू र प्रबन्धकहरूले तपाईंलाई लात हिर्काउँदछन् यदि तपाईं गणना कार्डहरू समातिएमा
मान्यता 6: यदि तपाइँ कार्डहरू गणना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ हरेक पटक विजेताको अन्त्य गर्नुहुनेछ
मिथ्या:: क्यासिनोहरूले छ वा आठ डेक कार्डहरू प्रयोग गर्छन् भने कार्ड गणना गाह्रो छ
कार्ड हटाउनमा के प्रभाव छ?
ब्ल्याकज्याकको खेलमा कार्डहरू हटाउँदै
ब्ल्याकज्याकमा प्रयोग गरिएको कार्ड गणना
कार्ड गणना कसरी काम गर्दछ
कार्ड गणना प्रणाली तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ
हाय- Lo कार्ड गणना प्रणालीको आधारभूत
हाई-लोमा प्रयोग गरिएको ट्यागहरू
एकल डेक र डबल डेक खेलहरूमा कार्ड गणनाको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ
तपाईं डबल डेक खेलहरूमा के गर्न सक्नुहुन्छ
सही गणनाको बारेमा केहि शब्दहरू
खेलाडीहरू कठिनाइहरू हराउन र ब्ल्याकजेकको खेलमा जित्ने तिनीहरूको खोजीमा रचनात्मक हुन जानिन्छ। कसले तयारी मा अतिरिक्त माईल लिन छैन यदि यसको परिणाम तुरन्त जीत र एक जीवन परिवर्तन ज्याकपॉट, सही हुनेछ? आज, खेलाडीहरूले केहि परिक्षण गरिएको र रचनात्मक रणनीतिहरूमा निर्भर गर्दछ गडबडीलाई हराउन र सफल बन्न जब यो ब्ल्याकज्याक खेल्न आउँदछ।
र अनुभवी खेलाडीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको एक लोकप्रिय दृष्टिकोण भनेको कार्ड गणना। मुख्य रूप से ब्ल्याकजेकको खेलमा प्रयोग गरिएको, कार्ड गणना गणनाको लागि गणित एक अनुमान हो कि यदि अर्को हातले खेलाडी वा क्यासिनो डीलरलाई मनपर्दछ। रणनीति प्रयोग गर्ने खेलाडीहरूलाई कार्ड काउन्टरहरू भनिन्छ, र उनीहरूको मुख्य काम भनेको घरको किनारा घटाउन खेलाडीहरू द्वारा देखिने कम र उच्च-मूल्य कार्डहरूको चालू तालिका गणना गर्न र राख्नु हो।
कार्ड गणनाको प्रक्रियामार्फत, खेलाडीहरूले आफ्नो घाटा कम गर्न सक्दछन् यदि गणना प्रतिकूल छ भने वा परिस्थितिको फाइदा लिन सक्छन् यदि उनीहरू सोच्छन् कि गणना उनीहरूको पक्षमा छ। चलचित्र ‘२१’ जुन केभिन स्पेसीले अभिनय गरीएको छ र त्यो कार्यमा कार्ड गणनाको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो।
आज, काउन्ट काउन्टी ब्ल्याकजेक खेलाडीहरू द्वारा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय रणनीति हो। त्यहाँ केहि संसाधनहरू छन् जुन मद्दत गर्दछ र खेलाडीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने जब यो कार्डहरू गणना गर्न र नाटकहरू कार्यान्वयन गर्न आउँछ। यद्यपि रणनीति बारे अझै मिथ्या मिथ्याहरू छन्।
र रणनीति को बारे मा यी गलत धारणा को कारण, धेरै खेलाडीहरु धेरै खेलाडी को खेल लाई असर गर्छन एक सूचित खेलाडी को रूपमा जो आफ्नो नतीजाहरु अधिकतम बनाउन चाहानुहुन्छ, तपाईले यी सबै मिथ्याहरू जान्नुपर्दछ र तिनीहरूको बारेमा साँचो के हो पत्ता लगाउनु पर्छ।
कार्ड गणना मुख्यतया एक मानसिक गतिविधि हो। यसैले कार्ड गणना कहिले पनि अवैधानिक हुँदैन।
हो, तपाइँले कार्डमा ट्र्याक राख्नु पर्छ जुन खेलमा डील गरियो। तर यसको मतलब यो होइन कि प्रवृत्ति ट्र्याक राख्न तपाईंले ती सबै याद राख्नु पर्छ। कार्ड काउन्टरहरूले के गर्छ केहि -१ वा +१ जस्ता केही कार्डहरूलाई ट्याग प्रदान गर्नु हो, र तिनीहरू केवल जोड्न वा घटाउनेछन् किनभने केहि कार्डहरू खेलाडीहरूलाई व्यवहार गरिन्छ। संक्षिप्तमा, कार्ड गणनाको लागि आधारभूत अंकगणितको समझ र केहि रेकर्ड राख्ने कौशल आवश्यक छ।
यदि तपाईंले ‘२१’ हेर्नुभयो भने, तपाईंलाई कार्ड गन्ती एमआईटीमा पढ्नेहरू जस्ता संख्या क्रौंचरहरूका लागि मात्र आरक्षित छ भनेर माफी दिइनेछ। जबकि कार्ड गणनामा गणितको एक तत्व छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं विषयमा विशेषज्ञ हुनुपर्छ। जब सम्म तपाईं कार्यशील रूपमा साक्षर हुनुहुन्छ, तब कार्ड गणनाले तपाईंको लागि पनि काम गर्न सक्दछ।
कार्ड काउन्टरहरू सबै प्रकारका प्लेयरहरूका लागि काम गर्न सक्छन् बिभिन्न bankrolls र बजेटको साथ। यदि तपाईंसँग न्यूनतम बैंकरोल छ भने, तपाईं उचित शर्त गर्नुहोस्। के महत्त्वपूर्ण छ यो हो कि तपाइँ तपाइँको बैrollरोल प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाइँ लामो अवधिको लागि खेल्न सक्नुहुनेछ।
हो, कार्ड गणनाको लागि केहि समय र प्रतिबद्धता लिन्छ तपाईंले अन्तमा यसको लाभहरू महसुस गर्न सक्नु अघि, तर यसले जीवनभर लिने छैन। त्यहाँ अब केही नयाँ प्रणालीहरू उपलब्ध छन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र मास्टर गर्न को लागी केहि घण्टा लाग्न सक्छ।
एक समय थियो जब क्यासिनो कार्ड काउन्टरमा कडा थियो, र तिनीहरूलाई चारैतिर राखिएको थियो। यस किसिमको चाल बुझिन सक्दछ किनकि क्यासिनो अपरेटरहरू उनीहरूको व्यावासायिक हितको रक्षा गर्न चाहन्छन्। तर आज, क्यासिनोबाट यस प्रकारको चाललाई अब मुख्यतया स्मार्ट खेलाडीहरूलाई धन्यवाद छ जसले विशेषज्ञ वकिलहरूको सहयोगका लागि आग्रह गरे।
यी भर्खरका कठिनाइहरूको साथ, क्यासिनोहरू अब सावधान छन् जब यो खेलाडीहरूको उपचारको कुरा आउँदछ जुन एक रणनीतिको रूपमा कार्ड गणना प्रयोग गरिरहेको छ। चरम अवस्थाहरूमा, क्यासिनोहरूले खेलाडीलाई टेबल छोड्न वा क्यासिनो छोड्नको लागि सोध्न सक्छ।
यो जोखिम हो जुन प्रत्येक खेलाडीले लिनुपर्दछ जब तिनीहरू कार्ड गणनाको अभ्यास गर्न चाहन्छन्। क्यासिनो अपरेटरहरू अझै पनि व्यवसाय चलाउँदैछन्, र उनीहरू आफ्ना रूचिहरू जोगाउन चाहन्छन्।
लोकप्रिय संस्कृतिमा, कार्ड काउन्टरहरू अत्यधिक सफल व्यक्तिहरूको रूपमा चित्रित गरिन्छ जुन प्रत्येक पटक जित्छ। यी केवल चलचित्र र पुस्तकहरूमा छन्, र वास्तविक जीवनमा यसको नक्कल गर्न लगभग असम्भव छ। के सहि छ कि कार्ड काउन्टरहरूले क्यासिनोमा न्यूनतम किनारा समात्दछ, तर यसको मतलब यो होइन कि क्यासिनो जुन उनीहरू हरेक पटक जित्नेछन्।
प्रयोग गरिएको डेकको संख्याले कार्ड गणना रणनीतिमा प्रभाव पार्दैन। जबसम्म खेलाडी सीपले सुसज्जित छ र उसले प्लस र माइनस मान ट्र्याक गर्न सक्छ, तब यो कार्डहरूको गणना गर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईंले रणनीतिको रूपमा कार्ड गणनामा किन ध्यान दिनुपर्छ? ठीक छ, यदि तपाईं खेलको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले यस रणनीतिलाई दृढताका साथ विचार गर्नुपर्छ।
समीक्षाको रूपमा, तपाईंले कार्ड गणनाको बारेमा केहि बुँदाहरू सम्झनु आवश्यक छ:
कार्ड गणनाको बारेमा केहि मिथ्या र गलत धारणा छन्, र यो उत्तम हो कि तपाई यी बारे सजग हुनुहुन्छ
कार्ड गणना एक परीक्षण रणनीति हो र जुन कुनै खेल वातावरणमा अनुमति छ
‘कार्ड गणनाले सबै प्रकारका खेलाडीहरूका लागि बिभिन्न bankrolls सँग काम गर्न सक्छ, र यसले गणितको कार्यात्मक ज्ञान भएका खेलाडीहरूको लागि पनि काम गर्न सक्दछ।
जबकि कार्ड गणनाले खेलाडीहरूलाई एक किनारा दिन्छ, यसको मतलब यो होइन कि खेलाडीहरू हरेक पटक खेल्छन्
केही क्यासिनोहरूले कार्ड काउन्टरहरूमा तर्साउन सक्छन् त्यसैले यो एक जोखिम हो जुन खेलाडीहरू लिन इच्छुक हुनुपर्दछ।
कार्ड गणनालाई बुझ्नको लागि एउटा तरिका उदाहरणको रूपमा मार्बलको साथ फिसोबुल प्रयोग गर्नु हो। भन्नुहोस् कि तपाईंसँग १०० कालो बलहरू र १०० कालो बलहरूको साथ फिशबोबल छ। अब, तपाईले चाहानु भएको शर्को राशि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाई अनियमित रूपमा माछा बलबाट बल लिनुहुन्छ।
मानौं तपाईं आफ्नो बाजी सेट गर्नुभयो र तपाईं पहिलो कार्ड छनौट गर्न तैयार हुनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुभयो र कचौरा भित्र हात राख्नुभयो र एउटा छान्नुभयो। तपाईलाई कालो बल प्राप्त गर्ने के कस्ता अडिगताहरू छन्? अवश्य पनि, तपाईसँग black०-50० प्रतिशत कालो हुने सम्भावना छ किनकि फिशबोबेलमा त्यस्तै संख्यामा सेतो र कालो बलहरू छन्।
भन्नुहोस् कि तपाइँले पहिलो चोटि कालो बल लिनुभयो, र तपाइँ यसलाई दोस्रो पटक जाँच गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ फेरि एक शर्त राख्नुहुन्छ भन्ने आशामा तपाइँ तपाइँको बिजय बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँले त्यो छनौट गर्नुभयो भने, तपाइँलाई अर्को कालो बल प्राप्त गर्न नहुने के लाग्छ? त्यसोभए तपाईले भन्नुभएको छ कि तपाईसँग 50०-50० अनौंठो हुन्छ भनेर जान्नु कि त्यहाँ बराबर संख्यामा सेतो र कालो बलहरू छन्?
यदि तपाईं कालो बल लिने उस्तै समानताहरू हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि पहिलो छनौटमा, तपाईं पहिले नै कालो बल पाउनु भयो, यसैले यसको संख्यालाई १०० देखि सेतो बलको तुलनामा to 99 मा कम गर्नुभयो।
संक्षेप मा, तपाइँको दोस्रो छनौटमा, त्यहाँ अलि राम्रो छ (यद्यपि धेरै नगण्य पनि) कालोको तुलनामा सेतो प्राप्त गर्ने। अब यो उही सिद्धान्त हो जसले ब्ल्याकज्याकको खेललाई नियन्त्रित गर्दछ।
मानौं तपाईं एकल-डेक ब्ल्याकजेकको खेलमा दुईजना थप खेलाडीहरूसँग भाग लिनुभयो, र पहिलो चरणको बखत सबै चार एसेस टेबुलमा खेलिएका छन्। तपाईलाई के लाग्छ दोस्रो राउन्डमा ब्ल्याकजेक पाउने सम्भावना छ? तपाईं कति शर्त गर्न तयार हुनुहुन्छ?
सबै चार एसेस पहिलो चरणमा उठाइएको छ, त्यसैले दोस्रो दौरमा ब्ल्याकजेक कमाउन तपाईको मौका ० बराबर छ। र यदि तपाईं स्मार्ट खेलाडी हुनुहुन्छ भने, तब तपाईं दोस्रो राउन्डमा न्यूनतम रकम मात्र शर्त सक्नुहुन्छ। अब, यदि त्यहाँ पहिलो चरणको दौरान कुनै Aces छनौट र खेलाइएको छ, भने यो तार्किक छ कि तपाइँ दोस्रो दौर मा एक ठूलो रकम शर्त।
यसको मतलब यो हो कि तपाईले कालोज्याकमा सामना गर्नु पर्ने समस्याहरू प्रत्येक राउन्डमा समान हुँदैनन्। विचित्रहरू कार्डमा निर्भर छन् जुन पछिल्ला राउन्डमा कोरिन्छ र प्ले हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, तपाईंले निम्न चीजहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ जुन कार्ड गणनासँग सम्बन्धित छ:
कार्ड खेलको रूपमा ब्ल्याकज्याक निर्भर-परीक्षण प्रक्रिया कार्ड खेल हो।
२ देखि from सम्म कम-मूल्य कार्डहरू हटाउँदा, खेलाडीको अपेक्षाहरूमा सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
१० सेकेन्ड्स र एसेस जस्ता उच्च मूल्य कार्डहरू हटाउनाले खेलाडीको अपेक्षाहरूमा नकारात्मक असर पार्छ।
केहि कार्डहरू हटाउनाले अरूको हटाइ भन्दा उसको उम्मीदमा ठूलो असर पार्नेछ।
कार्ड गणना गणना रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि, यो महत्वपूर्ण छ कि यसले कार्डहरूको विभिन्न शक्तिलाई डेकबाट टाढा राख्दा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
उल्लेख गरिएझैं डेकबाट केहि कार्डहरू हटाउनाले खेलाडीको अपेक्षाहरूमा असर पार्नेछ। उदाहरणको लागि, २ देखि from सम्मका कार्डहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, र फेस कार्डहरूले खेलाडीहरूको अपेक्षाहरूमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
एक खेलाडीको रूपमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ किन साना कार्डहरू हटाउने अनुकूल हुनेछ, र किन ठूलो कार्ड डेकबाट लिएका छन् प्रतिकूल मानिन्छ। ब्ल्याकजेकमा आधारभूत रणनीतिहरू र क्यासिनोद्वारा सेट गरिएको घर नियमहरू मनमा राखेर, तपाईं निम्न निष्कर्षहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ:
ब्ल्याकजेक अदायगीले खेलाडीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यदि डेकले अझै केहि उच्च-मूल्य कार्डहरू समावेश गर्दछ भने, तब त्यहाँ ठूलो सम्भावना हुन्छ कि तपाईं ब्ल्याकज्याक संकलन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको पक्षमा फाइदाजनक छ। यदी खेलाडी र डिलर ज्याकपॉटमा हिट गर्ने समान अवसर भएता पनि, खेलाडी अझै किनारामा छ किनकि उसको ब्ल्याकजेकलाई to देखि २ सम्म बोनस भुक्तानीको साथ भुक्तान गरिएको छ, जबकि डिलरको ब्ल्याकज्याक मात्र असमानको मात्र भुक्तान गरिएको छ, १-१ भन्नुहोस्। ।
जब तपाईं डबल डाउन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईं ठूलो कार्डको लागि आशा गर्दै हुनुहुन्छ । यदि तपाइँ आधारभूत रणनीति प्रयोग गरी कडा 11 देखि ११ सम्म डबल डाउन गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ आशा गर्नुहुन्छ कि तपाइँले ठूलो कार्ड पाउनुहुनेछ। साथै, डबल डाउन अक्सर हुन्छ यदि डिलरको अप-कार्ड कमजोर छ भने। यसको मतलब यो हो कि डिलरसँग उसको कमजोर अप-कार्डको साथ खस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, र ठूला कार्डहरू डेकमा बाँकी छन्।
विभाजन सिफारिस गरियो यदि डेकमा अझै केही ठूला कार्डहरू छन् भने। यदि डेकले अझै केही ठूलो कार्डहरू जस्तै १०s र एसेस समावेश गरेको छ भने विभाजन प्लेयरका लागि सब भन्दा अनुकूल छ। यो सत्य हो यदि तपाईं Aces, 7s, 8s, र 9s विभाजित गर्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ।
बीमा शर्त खेल्दा खेलाडीलाई फाइदा पुग्न सक्छ । मानक रणनीतिहरूको प्रयोग गरेर, बीमा सिफारिस गरिएको शर्त होईन, र यो हुनु हुँदैन। तर यदि तपाईंलाई बाँकी कार्डहरूको संरचना थाहा छ भने, यस प्रकारको शर्तले तपाईंको पक्षमा काम गर्न सक्दछ। बीमा मा एक शर्त अतिरिक्त लाभदायक छ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि डेक अझै 10s समावेश गर्दछ।
क्यासिनो नियमले भन्छ कि डिलर १ 16 वा कम मा हिट हुनेछ र १ to देखि २१ मा खडा हुनेछ। यदि डेकले अझै ठूला कार्डहरू देखाउँदछ भने, डिलरसँग हड्डी मानहरू १२ देखि १ drawing सम्म खिच्दा बस्ट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
यी केवल केहि कारणहरू छन् किन सानो कार्डहरूको उपस्थितिले डीलरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ, र ठूला कार्डहरूले खेलाडीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछन्।
कार्ड गणनालाई बुझ्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई यसको मुख्य सिद्धान्त पनि थाहा छ। कार्डहरूको फेरबदल पछि, तपाईं कार्डको डेकमा समान र ठूलो संख्यामा र साना कार्डहरूको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। खेल सुरू हुने बित्तिकै डेकको संरचना परिवर्तन हुनेछ।
अब, यदि तपाईं साना र ठूला कार्डहरू हटाउन ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंलाई डेकले के हावी पार्दछ भन्ने बारे विचार हुनेछ। यदि डेक ठूलो कार्डहरूले भरिएको छ भने, कार्ड काउन्टी प्रयोग गर्ने खेलाडीसँग किनारा हुनेछ, र उसले थप शर्त लगाउन सक्छ।
यदि डेक सानो कार्ड द्वारा हावी छ भने, कार्ड काउन्टर नुकसानमा छ, र उसले सानो शर्त गर्न आवश्यक छ। संक्षेपमा, काउन्टी गणना खेलाडीहरूलाई कालोज्याक खेल्दा निश्चित गोलमा किनारा छ कि छैन भनेर हेर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ।
त्यहाँ आज केहि प्रणालीहरू उपलब्ध छन्, तर पहिलोमा प्रत्येक कार्डको लागि ट्यागको प्रयोग आवश्यक पर्दछ। एउटा लोकप्रिय प्रणालीलाई हाय-लो भनिएको छ, र यसले निम्न कार्य गर्दछ:
+१ को मानको ट्याग प्रत्येक २,,,,, and र ranked र ranked्क गरिएको साना कार्डमा तोकिन्छ। यसले संकेत गर्दछ कि डेकबाट प्रत्येक कार्ड हटाउँदा खेलाडीहरूको अपेक्षाहरूमा सकरात्मक प्रभाव हुन्छ।
यो सिद्धान्त प्रयोग गरेर, ठूला वा उच्च-मूल्य कार्डहरू जस्तै १०s र एसेस -१ को मान दिइन्छ किनभने यी कार्डहरू हटाउनाले खेलाडीलाई मद्दत गर्दैन।
अन्य कार्डहरूको तुलनामा removal से9सेस को हटाउँदा आशामा कम प्रभाव पार्ने छ, यी कार्डमा तोकिएको मान ० छ।
कार्डमा बिभिन्न मानहरू तोक्नुभएपछि काउन्टरहरूले त्यसपछि अंकगणित जोडको साथ आउँदछ वा क्यासिनो सर्कलहरूमा चालु गणनाको रूपमा परिचित हुन्छ। पहिलो राउन्डमा चालु गणना अर्को राउन्डमा पुग्नेछ जब प्रत्येक राउन्डको अन्त्यमा गणनाको स्थितिलाई ध्यान दिँदै। यसको मतलब के हो यदि पहिलो राउन्ड पछि दौड गणना सकारात्मक छ?
स number्ख्यात्मक नम्बर प्राप्त गर्न, यसको मतलव साना कार्डहरू ठूला कार्डहरू भन्दा बढी प्ले गरिएका छन्। यसको मात्र मतलब यो छ कि Undealt कार्डले साना कार्डको तुलनामा बढी ठूला कार्डहरू प्रस्तुत गर्दछ।
यहाँ छलफल गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको सारांश छ:
यदि चालु गणना सकारात्मक छ भने, यसको मतलब यो हो कि प्रयोग नभएको कार्डहरूको डेक अझै ठूलो कार्डहरूले प्रभुत्व जमाउँछ, तपाईंलाई फाइदा पुर्‍याउँदै।
यदि चालु गणना नकारात्मक छ, यसको मतलब यो हो कि प्रयोग नगरिएका कार्डहरूको डेक साना कार्डले प्रभुत्व जमाउँछ जसले खेलाडीहरूलाई नोक्सानमा पार्दछ।
यदि चलिरहेको गन्ती ० हो भने, यसको मात्र मतलब यो छ कि डेकमा सानो र ठूलो बराबर संख्या छ
कार्ड मतगणना प्रविधिको प्रयोग मार्फत, कार्ड काउन्टरहरू अर्को राउन्डमा ठूलामा साना कार्डको अनुपातको रूपमा विचार हुनेछ।
काउन्टरहरूले खेलमा डिलिएका सबै कार्डहरू सम्झन जरूरी गर्दैनन्। यसको सट्टामा उनीहरू के गर्छन् प्लेयरको अपेक्षाहरूमा यसको प्रभाव प्रतिबिम्बित गर्न +१ वाa-1 को एक मूल्य जोड्नु हो। दिमागमा चलिरहेको गणनाको साथ, कार्ड काउन्टरहरू र अनुभवी खेलाडीहरू तिनीहरूको अर्को हातमा तिनीहरूको दांव परिवर्तन गर्न सक्दछन्। यहाँ खेलाडीहरूले कसरी दौडेर कुलमा उनीहरूको बेट्स कन्फिगर गर्ने उदाहरणहरू छन्।
यदि चालु गणना सकारात्मक छ, खेलाडीहरूले तिनीहरूको शर्त आकार वृद्धि हुनेछ।
यदि तिनीहरू अर्को हातमा दांव घटाउँदछन् यदि चालू गणना negativeणात्मक छ।
यदि तपाइँ रणनीतिमा ध्यान दिनुहुन्छ भने, तपाईले पत्ता लगाउनु हुनेछ कि कार्ड काउन्टरहरूले प्रक्रियामा अधिक हात गुमाउँदछन्, तर तिनीहरू लामो यात्रामा हराउँदा भन्दा बढी जित्नेछन्। यसको कारण यो हो कि तिनीहरूसँग हातमा प्राय: शर्त बढी हुन्छ जब तिनीहरू जितेको पैसाको तुलनामा हराउँछन् जब हार्छन्।
जे होस् डिलरसँग पनि डेकबाट ठूला कार्डहरू पाउने समान अवसर हुन्छ, खेलाडीहरूको फाइदा यो हो कि उनीहरू टेबुलमा धेरै चीजहरू गर्न सक्दछन्, विभाजन गर्न वा डबल डाउन गर्न, र तिनीहरूलाई to देखि २ सम्म पनि भुक्तान गरिन्छ। ब्ल्याकजेकमा यी सबै चीजहरूले खेलाडीलाई ब्ल्याकजेक खेल्दा फाइदा लिन मद्दत गर्दछ।
केहि कार्ड गणना प्रणाली अनलाइन उपलब्ध छन्, र प्रत्येक प्रकार फरक जटिलताहरूको साथ आउँदछ। सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करण मध्ये एक हाई-लो हो जसले प्लेयरहरूलाई कार्डका लागि मान, सानो कार्डको लागि +१ र ठूला कार्डहरूका लागि -१ -१ प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
अब, कार्ड गणनाको लागि यो दृष्टिकोणको प्रयोगको यसको सीमितता छ किनकि यो मानमा भएको परिवर्तनहरूलाई सहि रूपमा कब्जा गर्न असफल हुन्छ। उदाहरण को लागी, २ देखि from मा साना कार्डहरु लाई हटाउनाले डेकमा बिभिन्न प्रभाव पार्छ।
उदाहरण को लागी, of को हटाएमा २ भन्दा हटाईको ठूलो प्रभाव पार्छ। यही कारण हो कि आज केहि कार्ड गन्ती प्रणालीहरू उपलब्ध हुने अधिक सटीक हुन कोसिस गर्दछ जब यो मान प्रदान गर्ने काम आउँछ।
अन्य खेलाडीहरूको लागि, उनीहरूले के गर्छन् +२ को मान दर्साउन कि कार्ड हटाउनको अधिक प्रभाव छ र एक सानो प्रभावको साथ अर्को सानो कार्डमा +१ छ। तपाईले कार्ड गणना प्रणाली पनि भेट्टाउनुहुनेछ जुन +3 वा -3 को मान प्रदान गर्दछ।
यी सबै अनुभवी खेलाडीहरूका लागि कार्य गर्दछन् जसले कार्ड गणनाको कला मास्टर गर्न चाहान्छन्। तर तपाईं जस्तो शुरुआतीहरूको लागि, स्तर १ वा हाई-लो प्रणालीको साथ सुरु गर्नु उत्तम हो किनभने यो सरल छ।
सारांशमा, तपाईं कार्ड गणना प्रणालीको मुख्य सुविधाहरूमा ध्यान दिन सक्षम हुनुपर्दछ। यहाँ यो रणनीति को बारे मा केहि महत्वपूर्ण सुविधाहरु र पोइन्टहरु छन्:
कार्ड गणनामा, एक खेलाडी गणितमा कार्ड हटाउनको प्रभावको आधारमा ट्याग वा मानहरू माना assign्कन गर्दछ।
डेकबाट साना कार्डहरू हटाउनु प्लेयरका लागि लाभदायक छ, त्यसैले यी कार्डहरूलाई सकारात्मक मानहरू दिइन्छ।
डेकबाट ठूला कार्डहरू हटाउने खेलाडीहरू हानिकारक हुनेछन्, त्यसैले यी कार्डहरूलाई नकारात्मक मान दिइन्छ।
खेलाडीहरूले मानसिक रूपमा प्रत्येक राउन्ड पछाडि एक दौडको कुलको साथ जोड्न मानहरू थप्नेछ।
पहिलो राउन्डको लागि चालु गणना अर्को राउन्डमा लगिनेछ।
जब चालु गणना पहिले नै सकारात्मक छ, यो एक संकेत हो कि उसको छेउमा छ र उसले अर्को राउन्डको लागि शर्त बढाउन सक्छ।
जब चालु कुल नकारात्मक छ, यो खेलाडी को लागी प्रतिकूल परिस्थितिको रूपमा देखिने छ। यसैले उसले अर्को चरणमा सानो शर्त लगाउँछ।
एक सकारात्मक गणना खेलाडीहरूको लागि उपयोगी छ किनकि उनीहरूलाई कालोज्याकहरू कमाउने उच्च अवसर हुनेछ, र यदि उनीहरू विभाजन गर्ने वा डबल डाउन गर्ने निर्णय गरे भने तिनीहरू अधिक सफल हुन्छन्।
कार्ड गणना प्रणालीको लोकप्रिय संस्करण हाई-लो प्रणाली हो जुन +१ वा -१ कार्डमा टेबलमा डिलि assign गरिएको हुन्छ।
कार्ड गणना प्रणालीको स्तर २ ले +२ र -२ को मान निर्दिष्ट गर्दछ।
कार्ड गन्ती प्रणालीको स्तर ले +3 र -3 को मान प्रदान गर्दछ, र यो अधिक जटिल र अनुभवी खेलाडीहरूको लागि आरक्षित मानिन्छ।
यो हार्वे डब्लर हो जसले १ 63 system63 मा पहिलो पटक हाय-लो प्रणालीको बारेमा विस्तृत छलफल गरे। डा। एड्वर्ड थोर्पले लोकप्रिय बनाएको ठाउँमा अन्य प्रणालीहरू भए पनि, डुबनरद्वारा सुरु गरिएको प्रणाली कम जटिल र बुझ्न सजिलो थियो। यसको सरलता को लागी धन्यवाद, हाई-लो प्रणाली धेरै ब्ल्याकजेक प्लेयर द्वारा लामो अवधि को लागी प्रयोग गरीएको छ र यो आज सम्म लोकप्रिय छ।
उल्लेख गरिए अनुसार तपाईले मानहरू +१, -१ वा ० कार्ड तोक्नु पर्ने हुन्छ किनकी तिनीहरू टेबलमा काम गर्छन्। कम कार्डहरूलाई +१ को मान तोकिनेछ, र १० सेकेन्ड जस्तो उच्च कार्ड -१ दिइनेछ। ० को तटस्थ मान to देखि to मा दिइन्छ।
यदि तपाईं यस कार्ड गणनाको कला मास्टर गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईले प्रत्येक कार्डको मूल्य सजिलैसँग कसरी पहिचान गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ। तपाईले धेरै अभ्यास गर्नु पर्छ ताकि तपाईलाई मान तोक्न सजिलो हुनेछ डेकबाट बाहिर आउँदा।
अभ्यासको एक रूपको रूपमा, तपाईं शफल कार्डहरूको डेक लिन सक्नुहुनेछ र यसलाई एक पटकमा लिन सक्नुहुनेछ, प्रत्येक मार्गको मूल्य तोक्नुहोस्। प्रत्येक कार्ड सम्झौता भएको रूपमा, तपाईं यसलाई एक मान निर्दिष्ट गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो प्रकृया गरिरहनुहोस् जबसम्म यो तपाईको लागि मानहरू प्रदान गर्न प्राकृतिक हुँदैन।
एक पटक तपाईले मानहरू प्रदान गर्ने कलामा पोख्त भएपछि, तपाईले गर्नुपर्ने अर्को चरण चालु कुलको साथ आउँदछ।
मानौं कि कार्डहरू सम्झौताहरू निम्न हुन्: २,,,,,,, A र J कार्ड गणनाको आधारभूत चीजहरूको प्रयोग गरेर तपाईंले निम्न ट्यागहरू नियुक्त गर्नुपर्‍यो: +१, +१, ०, +१, -१ र -१
यो श्रृंखला प्रयोग गरेर, चालु कुल हुनु पर्छ: +१, +२, +२, +3, +२ र +१। यसको मतलब यो छ कि यस राउन्डको अन्त्यमा, चालु गणना +१ मा छ।
अवश्य पनि, वास्तविक खेलमा, तपाईं श्रृंखला लामो हुनेछ। तर जब यो कार्ड गणनाको प्रक्रियामा आउँदछ, तपाईं एक पटकमा केही कार्डहरू गणना गरेर सुरू गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाईं यो प्रक्रियाबाट सहज हुनुहुन्न।
यहाँ विचारको अभ्यास गर्न को लागी तपाइँ तालिका मा रणनीति को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले। जब तपाईं कार्ड गणनाको कला अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईं शुद्धता र गतिमा केन्द्रित गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईंको शुद्धता र गतिले तपाईंलाई मद्दतको कला मात्र मास्टर गर्न मद्दत गर्दछ, तर तपाईंलाई टेबुलमा सही सूचना दिनेछ जब तपाईंलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्दछ।
अर्को प्रकारको ड्रिल जुन तपाईंसँग परिचित हुनुपर्दछ ‘कार्ड रद्द ड्रिल’ हो। यो गर्नका लागि तपाईले कार्डको डेक लिनु पर्छ र एकै समयमा दुईवटा कार्डहरू पल्टाउनु पर्छ। यदि पहिलो कार्ड कम छ भने (+१) र दोस्रो कार्ड उच्च छ (-१), यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले मात्र एक अर्कालाई रद्द गर्नेछन्, यसरी तपाईंको चालु गणनामा कुनै असर पर्दैन। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ एक अर्कालाई रद्द गर्न सक्नुहुन्छ, गणना तपाइँको लागि धेरै सजिलो हुनेछ।
के हुन्छ यदि अर्को जोडी मा तपाइँ -2 र +4 को मान प्राप्त? वा शायद एक +२ र -4? प्रत्येक जोडीको लागि चलिरहेको कुल के हुनेछ? यदि तपाईंसँग पहिलो दृश्य छ भने, रद्दताले +२ को मानको परिणाम दिनेछ र दोस्रो परिणामले -२ परिणाम दिनेछ।
यी उदाहरणहरू गाह्रो र जटिल लाग्न सक्छ, तर जब तपाईं यो धेरै अभ्यास, तब तपाईं सजिलै केहि कार्ड रद्द गर्न सक्नुहुनेछ यसैले तपाईंलाई द्रुत र सजिलो तरिकामा चालू कुल बनाउनको लागि अनुमति दिँदै।
त्यसोभए ब्ल्याकजेकको खेल खेल्दा कसरी तपाईं कार्ड गणनालाई लागू गर्नुहुन्छ? यस मार्गनिर्देशनको लागि, हामी एकल डेक खेलमा केन्द्रित हुनेछौं। यस खेलमा तपाईंको शर्तलाई भिन्नता दिन सजिलो छ, तर खेलाडीहरूको लागि चुनौती एक हराउन मिल्ने एकल-डेक खेल फेला पार्दैछ। त्यहाँ दुई कारणहरू छन् यी तालिकाहरू प्राय: अपराजेय छन्:
धेरै जसो तालिकाहरू कालोज्याकको लागि केवल -5-। मात्र प्रस्ताव गर्दछ।
डिलरले डेकले फेरि एकपल्ट फेरी फेर्नु भन्दा पहिले खेलाडीहरूलाई प्राय: तीन राउन्डसम्म दिइन्छ।
सकेसम्म, तपाईंले टेबुलहरू छोड्न प्रयास गर्नु पर्छ जुन 6–5 भुक्तानी गर्दछ। अझै केहि क्यासिनोहरू छन् जुन कालोज्याकको लागि -2-२ प्रस्ताव गर्दछ, र चुनौती भनेको तपाईंले कहाँ खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन हो।
अर्को समस्या जुन तपाईंले पनि विचार गर्नुपर्दछ यसमा फेरबदल समावेश गरिएको रकम हो। प्राय जसो क्यासिनोहरूमा, डीलरले नियम follows पालना गर्दछ। Of को नियममा, खेलाडीहरूको संख्या र s बराबर राउन्डहरूको संख्यामा फेरबदल आदेश दिइनेछ।
यदि तालिकाले players को नियम प्रयोग गरी चार खेलाडीहरू सुविधा प्रदान गर्दछ भने, डिलरले दुई राउन्ड पछि कार्डहरू साफल गर्नेछ। यदि त्यहाँ पाँच खेलाडीहरू छन् भने, यसको मतलब यो हो कि डिलरले तुरून्त एक राउन्ड पछि कार्डहरू शफल गर्नेछन्। यहाँ मुख्य कुरा यो छ कि सबै भन्दा एकल डेक खेलहरूमा, तपाईं धेरै राउन्डहरू खेल्न सक्नुहुन्न किनभने डिलरलाई केही समय पछि डेक शफल गर्न निर्देशन दिइन्छ।
त्यहाँ केही क्यासिनोहरू पनि छन् जुन यस नियमको भिन्नता, of को नियम र of को नियम प्रयोग गर्दछ। Of को नियम थोरै राम्रो छ किनकि यसले तपाईंलाई केहि राउन्ड खेल्ने बढी संभावना दिन्छ, जबकि of को नियम सबैभन्दा खराब हो।
मानौं तपाईंले एक ‘पिटेबल टेबल’ फेला पार्नुभयो, र तपाईंलाई शफल अर्डर गर्न अघि कम्तिमा तीन राउन्ड खेल्ने आश्वासन दिइएको छ। तपाईं कसरी आफ्नो बाजी योजना बनाउनुहुन्छ?
निम्न चालु गणनाको साथ यस उदाहरण प्रयोग गरौं: +१ वा कम, +२, + + र + + वा अधिक। इकाईहरू १, २, and र are हो।
यस उदाहरण माथिको १–4 शर्त फैलाएको छ कि तपाईं बनाउन सक्नुहुने न्यूनतम शर्त १ + युनिट वा कमको चल गणनामा १ इकाई हो, र तपाईंको गणना बढ्दै जाँदा तपाईंले शर्त १ इकाईले बढाउनुहुनेछ।
अब, अधिक सकारात्मक चालु गणना, राम्रो आफ्नो लाभ, यसरी तपाईं अधिक शर्त आवश्यकता हुनेछ। तपाईं यस शर्त कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं w १० देखि $ ,०, वा $ १०० देखि $ of०० सम्म बेटिंग स्प्रेडिंग प्रयोग गरेर अधिक ब्याज गर्न चाहनुहुन्छ भने।
तपाईको शर्त राख्दा तपाई सावधान हुनुपर्छ। तपाईको शर्त एक $ १० देखि $ from सम्म अर्को हातमा पुश गर्नु जब $ २ before पहिले हराइसकेको छ भने राम्रो चाल होईन र जुन धेरै अनुभवी खेलाडीहरूले अभ्यास गर्दैनन्।
अभ्यासमा, अनुभवी खेलाडीहरूले हात जितेर केवल उनीहरूको बाजी बढाउनेछन्। यद्यपि चालु गणना अहिले + + मा छ, कहिलेकाँही बेट्स बढाउँदा सतर्क रहनु उत्तम हुन्छ ताकि तपाईं रडारको मुनि खेल्नुहुनेछ र क्यासिनोले तपाईंलाई कुनै प्रश्न वा अवलोकन गर्दैन। यहाँ सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि जब तपाईसँग फाइदा हुन्छ कम शर्त लगाउनु हो र यदि तपाईले फाइदाको आनन्द लिनु हुन्न भने कम शर्त लगाउनु हो।
यदि तपाईं डबल-डेक खेलमा खेल गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं १–6 शर्त फैलाउनको लागि जानुहोस्। यो थोरै ठूलो प्रसार हो किनभने क्यासिनोले एक सानो किनारा फिचर गर्दछ र यसको लागि क्षतिपूर्ति गर्दछ, खेलाडीहरूले पनि तिनीहरूको बाजी फैलाउनु पर्छ।
फेरि, तपाईं होसियार हुनुपर्छ डबल डेक खेलहरूमा रणनीति खेल्दा। तपाईंले बेट्स सम्बन्धी ठुलो जम्पहरू बनाउन आवश्यक पर्दैन त्यसैले तपाईं डिलर वा क्यासिनो सुपरवाइजरहरूको ध्यान आकर्षण गर्नुहुने छैन जुन कार्ड काउन्टरहरूको विरूद्ध सावधान छन्।
एकल र डबल डेक खेलहरूमा सट्टेबाजीको आधारभूत नियमहरू कभर गरेपछि, तपाईंले निम्न मुख्य पोइन्टहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ:
खेलाडीहरूले टेबुलहरू छनौट गर्नुपर्दछ जहाँ उनीहरू खेल्न चाहन्छन्, विशेष गरी उनीहरूले जसले ब्ल्याकज्याकको लागि -2-२ भुक्तान प्रस्ताव गर्छन्।
तपाईंले चालु गणनाको आधारमा तपाईंको बेट्स भिन्न गर्न आवश्यक छ।
चालु गणना एकल र डबल डेक खेलहरूमा भिन्न हुनुपर्दछ।
तपाईंले चालूमा गणना बढाउनुभयो भने थप शर्त आवश्यक छ र शर्त कम भएमा शर्त कम गर्नुहोस्।
यदि तपाईं एकल-डेक गेमहरूमा खेलिरहनु भएको छ भने तपाईं १- bet बेटि .्ग स्प्रेड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डबल डेक खेलहरूमा, तपाईले १–6 बेटिंग स्प्रेड प्रयोग गर्नु पर्छ।
यो सावधानीपूर्वक शर्त राख्न र क्यासिनो पर्यवेक्षकहरू द्वारा अवलोकन वा प्रश्नको जाल हुनबाट जोगिन बेट्समा ठुलो जम्प बनाउनबाट जोगिनु उत्तम हुन्छ।
अनुभवी खेलाडीहरू जो उनीहरूको कार्ड गन्ती र उनीहरूको बेट्समा सटीक हुन चाहन्छन्, उनीहरूले के गर्छन् वास्तविक गणनाको लागि गणना गर्नुहोस्। यहाँ एक सामान्य सूत्र छ जुन तपाईले साँचो गणनाको गणना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
डेकमा गणना / शेष कार्डहरू चालु गर्दै छ = सत्य गणना
यदि तपाईंसँग +6 को चालु गणना छ र त्यहाँ डेकमा more थप कार्डहरू छन् भने, TC +२ हो। त्यसोभए डेकमा बाँकी रहेको कार्ड कसरी थाहा पाउने? तपाईंले शारीरिक रूपमा डीलर द्वारा आयोजित डेक जाँच गर्न आवश्यक छैन। तपाईले के गर्नु पर्छ भनेको खारेज ट्रे जाँच गर्नु जुन प्राय: डिलरको दायाँमा राखिन्छ। डेकमा रहेको बाँकी कार्डहरूको अनुमान गर्न तपाईं केवल ट्रेमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंसँग साँचो गणनाको अनुमान छ, अब तपाईं यसलाई आफ्नो शर्त कन्फिगर गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा यदि तपाईंलाई तपाईंको खेल्ने रणनीतिबाट टाढा सर्न आवश्यक छ भने। शर्त पूरा गरे पछि र हात खेल्नु भएपछि, तपाईंलाई चालू गणनामा फिर्ता जान आवश्यक छ जुन सबै समयमा अद्यावधिक हुनुपर्दछ।
याद गर्नुहोस्, सही शर्त निर्धारण गर्न राउन्ड सुरू हुनु भन्दा पहिले तपाईंले सेकेन्डको एक मामलामा TC मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ समय आउनेछ जब TC को दशमलव अ points्क हुन्छ। यदि यो मामला हो भने मात्र यसलाई बन्द गर्नुहोस्।
कार्ड गणना आज अनुभवी खेलाडीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको शीर्ष रणनीति मध्ये एक हो।
यद्यपि कार्ड गणनाको बारेमा केहि स्रोतहरू छन्, अझै रणनीति वरपर केहि मिथ्याहरू छन्।
ब्ल्याकज्याक एक निर्भर-परीक्षण प्रक्रिया खेल हो।
डेकबाट केहि कार्डहरू हटाउनाले खेलाडीमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ
कार्ड गणनामा, +१ को ट्याग कम-मूल्य कार्डमा तोकिएको छ, र -१ ठूलो मान कार्डको लागि। To देखि from का कार्डहरूले ट्याग ० प्राप्त गर्नेछन्।